टेक समर्थन | शीज़ीयाजुआंग नेमिंग आयात र निर्यात कं, लिमिटेड
हाम्रो सफ्ट्सेल ज्याकेटहरू गुणस्तरीय प्रदर्शन 3in1 कपडाबाट बनेका छन्।
बाहिरी तस्बिर कपडा DWR समाप्त, TPU झिल्लीको बीचमा, भित्रबाट माईक्रो माइक्रो ऊनसहित बोडिएको, कपडा वाटरप्रूफ, वाइन्डप्रूफ र सास लिन योग्य छ, यसले तपाईंलाई तपाईंको बाहिरी कारनामहरूमा सुख्खा र आरामदायक राख्दछ। वाटरप्रूफ प्रदर्शनले पानी बाहिर राख्छ जबकि हाइड्रोफिलिक सासिएबिलिटि प्रणालीले भित्री चिसोबाट बच्न अनुमति दिन्छ। DWR बाहिरी कपडाले वाटरप्रुफ क्वालिटीलाई अझ सुदृढ बनाउँछ र गार्मेन्ट्स वाइन्डप्रुफ प्रदर्शनमा थपेको बेला पानीलाई बगाउन मद्दत गर्दछ।
यो हिड्ने, क्याम्पि,, कम्बि out वा जहाँ कहीं पनि तपाईंको बाह्य कार्यहरूले तपाईंलाई लिने उपयुक्त छ।
चालु शर्ट भनेको के हो?
एक चलिरहेको शर्ट सामान्यतया प्रदर्शन कपडाहरूबाट बनेको हुन्छ र चलिरहेको बेला अधिकतम आरामको लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। धेरै बिभिन्न प्रकारहरू फरक मौसम परिस्थितिहरू, दौडने प्रकारहरू, र व्यक्तिगत प्राथमिकताहरू समायोजन गर्न निर्माण गर्दछन्।
केही धावकहरू दौडका लागि सामान्य, कपासको टीशर्ट लगाउँछन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू प्रासंगिक धावकहरू हुन् वा खेलकुदमा सुरु भएमा। एउटा चल्दै गरेको शर्टको टी शर्टमा धेरै फाइदाहरू छन्, छालाबाट छिटो पसिना बगाउने, द्रुत ड्राई, एन्टी-यूभी, एन्टी-गन्धको लागि।
धेरै जसो चालु शर्टहरू जुन गर्मी महिनाहरू र न्यानो तापक्रमको लागि डिजाइन गरिएको छ पसिना-विकि and र गन्ध कम गर्ने फाइबरहरू। केहीसँग अन्तर्निर्मित यूभी सुरक्षा पनि हुन्छ। चाँदी वा सिरेमिक फाइबर समावेश गर्ने कपडा दुबै विरोधी-पसीना र विरोधी गन्ध गुण प्रदान गर्दछ। एन्टिमिक्रोबायल कपडा पनि गन्ध कम गर्न डिजाइन गरिएको छ।
जाडोमा चल्दै गरेको शर्टको मुख्य लक्ष्य दुबै तातो र हल्का हुनु हो। सिंथेटिक सामग्रीहरू, जस्तै पोलिस्टर र फाइबर मिश्रणहरू, अक्सर प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ जाडोमा चल्दै गरेको सर्टहरू पनि छन् जसमा आंशिक रूपमा हातहरू ढाक्नको लागि आस्तीनमा हुड वा थम्ब होलहरू समावेश छन्। विशेष गरी चिसो मौसममा, तहहरूमा पोशाक लिन उत्तम हुन्छ, कम्तिमा चलिरहेको शर्ट र हल्का वजनको ज्याकेट नायलॉन वा अन्य वायु-प्रतिरोधी सामग्रीले बनेको हुन्छ।
दुबै पुरुष र महिला चलिरहेका सर्टहरू लामो बाहुला, छोटो आस्तीन, स्लीभलेस र ट्या tank्क शैलीहरूमा उपलब्ध छन्। यी कपडाहरूको फिट छाडादेखि कम्प्रेसन शर्ट सम्मिलित छ, जुन धेरै स्नुग्ली फिट हुन्छ। नेकलाइन शैलीहरूमा अतिरिक्त गर्मीका लागि नक्कल गर्दन, र चालक दल र वी-नेक शैलीहरू समावेश छन्। अन्य सुविधाहरू कहिलेकाँही शर्टमा चल्दा फेला पर्दछ झिपर्ड जेब र लुकेका पट्टिहरू हेडफोन तारहरूलाई ठाउँमा राख्नुहोस्।
चिसो वाइक fabric कपडा के हो?
विकि्ग, शरीर र कपडा आफैंमा नमी सार्नको लागि त्यस कपडाको क्षमतालाई जनाउँछ; सास फेर्ने र प्रयोगकर्ताको छाला पसिनाबाट सुक्खा राख्न सक्ने क्षमता।
विकिking फेब्रिकको अर्थ, त्यस कपडामा सानो केशिका हुन्छन् जुन पसिनालाई पनी छालाबाट टाढाबाट बाहिर निकाल्न पर्याप्त ठुलो हुन्छ। यसले शरीरलाई सुक्खा र चिसो राख्न मद्दत गर्दछ जब व्यक्ति श्रमबाट पसिना पकाउँछ।
हाम्रो उच्च प्रदर्शन, टेक्निकल, सास फेब्रिक, के तपाईं दिनभर तपाईंलाई सुख्खा र आरामदायी राख्नुहुनेछ। अब पसिना को बारे मा चिन्ता नगर्नुहोस्।
विकि fabric फेब्रिक सबै प्रकारका बाहिरी गतिविधिहरूमा हिड्नेदेखि लिएर पैदल यात्रासम्म प्रयोग गरिन्छ र सबै मौसमहरूमा प्रयोग गरिन्छ तर विशेष गरी चिसो तापक्रममा प्रभावकारी हुन्छ। यो एक राम्रो इन्सुलेटर को रूप मा कार्य गर्न सक्छ, गर्मी को मामला मा, पनि। स्पोर्ट्सवेयर, प्रशिक्षण पोशाक, आधार तह, एथलेटिक लगाउने आदिका लागि आदर्श।
हिउँ धुने: कसरी तपाइँको टी शर्ट दिने कि भिन्टेज थकित देखिन्छ
सबै भन्दा राम्रो टी-शर्टहरू बिल्कुल नयाँ छैनन्, ती हुन् जुन थोरैमा धुन्छ। उनीहरूको उमेर उनीहरूसँग छ। यस्तो मनपर्ने भिन्टेज टी शर्ट कसरी पाउने?
हिउँ धुने प्रक्रिया तल छ:
१, सुख्खा रबरको बल पोटाशियम परमंगनेटमा डुबाउनुहोस्
२, सुख्खा T शर्ट विशेष रोटरी सिलिन्डरमा रबर बलको साथ पीस। यस प्रक्रियाको दौरान पोटासियम परमंगनेटले सम्पर्क पोइन्टमा कपडा फेर्नेछ
,, धुने प्रभावहरू जाँच गर्नुहोस्
,, पानीमा धुनुहोस्
,, ऑक्सलिक एसिडको साथ तटस्थता
,, सफ्टनर लागू गर्नुहोस्
त्यसोभए तपाईले नयाँ भर्ने टिन्ट शर्टमा लगाउन सक्नुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस्, यो पेशेवर धुलाई कारखानाले बनाउनुपर्दछ, र सिलाई गर्दा तपाइँले उपयुक्त बलपोइन्ट सुई प्रयोग गर्नुपर्नेछ र समयमै सुई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अन्यथा, तपाईको टी शर्टलाई धुनेमा जोखिम छ।